Tian’Ilay Didim-panjakana Momba Ny Fifindràmonina Ianao Hieritreritra Hoe Mora Ny Fahazoana Taratasy Hidirana Ara-dalàna Any Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Febroary 2017 7:24 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, Ελληνικά, Português, Nederlands, عربي, English
Hetsi-panoherana tao Boston manohitra ny didim-panjakana momba ny fifindràmonina. SARY : celería kely avy amin'ny Instagram.
Tamin'ny tolakandron'ny Zoma 27 Janoary lasa teo, angamba manodidina ny fotoana naha-maina ny ranomainty tamin'ilay Didim-panjakana momba ny fifindràmonina nampalaza ratsy ny filohan'i Etazonia amin'izao fotoana izao, nijery ny fizarana voalohany amin'ilay vokatra Breziliana Netflix “3%” ny vondron'olona iray tao aminà efitrano fianarana tao amin'ny Anjerimanontolon'i Antilles andrefana any Trinidad sy Tobago.
Manolotra hoavy mandiso fanantenana ilay andian-dahatsoratra izay iatrehan'ny tanora fitsapana maromaro antsoina hoe “dingana” mba hanombanana ny fahamendrehany hiditra amin'ny orinasa any ivelany, ilay paradisa an-tany izay 3% amin'ny mpifaninana monja no afaka hiditra. Amin'ny dingana anatin'ny ampahany iray ao amin'ny fizaràna voalohany, miatrika fakàna am-bavany manala baraka ireo mpifaninana. Ao amin'ny resadresaka manaraka, milaza ny mpianatra fa mampahatsiahy azy ny ftsidihana ny masoivohon'i Etazonia tany amin'ny seranan-tsambon'i Espana izany. Nisy monomonona fankatoavana tao anatin'ny efitrano, ao anatin'izany ny ahy. Indray mandeha, tamin'ny fiandohan'ireo taona (nitondran'i) G. W. Bush, maty teo amin'ny sisin'ny làlana akaikin'ilay masoivoho voalaza teo ilay Honda Civic-ko efa drodroka. Raha izaho niezaka namelona ilay fiara, nisy miaramilan-tsambo Amerikana roa nipoitra tsy hay hoe avy aiza, nandrangaranga basy fitondra manafika sy nivazavaza niteny tamiko — mazava ho azy fa mpanao vy very ny ainy amin'ny baomba — mba “tsy hihetsika!”. Ary teo ivelan'ny trano izany. Tao anatiny, tao amin'ny sampan'ny masoivoho, efa hitovy amin'ny mampanahy ny zavatra nitranga.
Lafiny iray momba ny tantara manodidina ilay Didim-panjakana izay nanako mafy ho ahy dia ilay hevitra diso hoe mora ny fahazoana miditra ara-dalàna any Etazonia. Raha ny marina, fitaka izany. Ny tsirairay amin'ireo mpitsidika ara-dalàna an-jatony izay voaroaka teny amin'ny seranam-piaramanidin'i Etazonia vokatr'ilay Didim-panjakana dia niatrika fakàna am-bavany hentitra, mandreraka vao nahazo ny fahazoandàlana mivahiny. Ho an'ny mpitsoaponenana, araka ny nohantitranterina efa ela, henjana kokoa aza ny dingana.
Angamba tokony hazava be fa, noho ny lazan'i Etazonia ho toerana fitodiana, tsy mora ny fahazoana taratasy fahazoandàlana Amerikana. Nefa raha olom-pirenena Amerikana ianao, na avy amin'ny iray amin'ireo firenena ao anatin'ny lisitry ny fandaharanasa tsy ilàna ny taratasy fahazoandàlana Amerikana, mety tsy hijery amin'izay lafiny izay, na dia mpanao gazety mandrakotra ilay tantara aza ianao. Arakaraka ny toerana itondran'ny diany azy ireo, maro ny olona mety tsy mila mangataka taratasy fahazoandàlana miditra any mandritra ny fiainany manontolo. Ny fahatakarana ny zavatra lalovan'ny olona mba hahazo ny fahazoana miditra ara-dalàna any Etazonia, na izany aza, dia toa zava-dehibe mba hahatakarana ny haavon'ny fanimbàna avo lenta asehon'ity Didim-panjakana ity.
Manana ny zo rehetra mba hiantoka sy hitandro ny filaminan'ny sisintaniny toy ny ataon'ny firenena rehetra manana ny fiandrianany i Etazonia. Nefa araka ny fanamarihan’i Ron Nixon omaly tao amin'ny New York Times, misy sahady rafitra fanarahamaso sy fanadihadiana matanjaka izay atrehin'ireo kandidà ara-dalàna ho any Etazonia mialohan'ny hanitsahan'izy ireo ny tanin'i Etazonia. Ny dingana fangatahana taratasy fahazoandàlana miditra fotsiny dia efa sarotra be. Tsy maintsy manome antontan-taratasy ireo mpangataka, anisan'izany filazalazana ny kaonty any amin'ny banky, taratasy fanamarinana ny nahavitana raharaham-pirenena, ary ny taratasy fanamarinana ny fifikirana mafy amin'ny tanindrazana toy ny taratasy fanamarinana ny fanambadiana ary ny taratasy fanambarana fananana, izay midika fa ireo tanora, tsy manambady dia voailika hatrany am-piandohana. Avy eo, misy fanadihadiana mitohy ataon'ny mpiasan'ny masoivoho iray. Matetika tsy voaray ireo fangatahana fahazoandàlana miditra, noho ny antony isan-karazany. Ary tokony homarihina fa raha misy ny fandavana, ny Masoivohon'i Etazonia dia tsy mamerina ny 160 Dolara saran'ny fikarakarana, izay maneho ny ampahany maro amin'ny karama raisina any amin'ny tany maro.
Rehefa tonga tany Etazonia, na dia ny mpivahiny somary tsy azo lavina toy ny ahy – olom-pirenena vehivavy avy any Trinidad sy Tobago mitondra anarana toa “kristianina” ny fihaino azy, efa nihoatra ny taonan'ny mpanondrana an-tsokosoko zava-mahadomelina aza — indraindray dia niatrika ilay fanadihadiana hafahafa avy amin'ny fifindràmonina Amerikana. Iza no fantatro tany Holandy? Nanontaniana ahy io indray mandeha tamin'ny fandalovako tany Miami raha handeha ho any Eoropa, toy ny hoe ny fahalalàna olona ao amin'ny firenena dia zavatra tena ilaina mba hahafahana mandeha any. Mihoron-koditra aho mieritreritra ny fanontaniana apetraka amin'ny olom-pirenena avy amin'ireo firenena voatanisa ao anatin'ilay Didim-panjakana.
Ireo olona rehetra nikasa hiditra tany Etazonia tamin'ny fomba ara-dalàna tsara tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo, ka nitsimbadika ny fiainany noho ity Didim-panjakana momba ny fifindràmonina ity, dia manana zo tanteraka hahatsapa ho lasibatra ary voaendrikendrika. Nandoa ny vidin'ny fidirana ireo olona ireo, na an-kolaka na ara-bakiteny. Mety hieritreritra ianao hoe ho tia izany ny fitantanana iray izay mpandraharaha no mameno azy. Nefa fantatrao koa ny antony tsy itiavan'izy ireo izany.